Ndezvipi mitemo pcb marongerwo rehurumende? - China Fastpcba Technology
Ndezvipi mitemo pcb marongerwo rehurumende?
Pcb bhodhi wiring ndeimwe zvinokosha vasingagoni kumhanya. PCB wiring inobva magetsi schematics uye waya tafura uye inodiwa waya upamhi uye spacing marongerwo akadhindwa waya, wiring vanofanira kazhinji kutevera mitemo zvinotevera:
1. pafungidziro kugutsa zvinodiwa kushandiswa, Unorudzi kusarudza wiring nzira kuroorwa rukoko → wokutanga rukoko → multilayer, kuti, zviri wiring inogona nyore.
2. somureza pamusoro chete rukoko of pcb bhodhi anochinja mirayiridzo ine murwere kana chokuchinja, uye nharaunda yose curvature chinguva nani, kudzivisa yemagetsi munda wevasungwa, chiratidzo kufungisisa uye yokuwedzera impedance.
3. wiring marongerwo pakati maviri kubatana Mapedhi kwakafanana pfupi sezvinobvira, uye anenge anonongedzera uye zviduku anonongedzera kutanga. Kuderedza kunonoka uye kupindira kuti anonongedzera duku. The grounding mutsetse Nhoo anofanira vakaisa pedyo mazano mutsara analoginen redunhu; kuti marongerwo mumwechete rukoko Muitisi anofanira zvakaenzana anoparadzirwa. The conductive nzvimbo imwe neimwe waya anofanira tichishandisa nepakati kudzivirira bhodhi warpage.
4. Digital matunhu analoginen matunhu anofanira kuparadzaniswa ari wiring kuitira kuvhiringidza mumwe.
5. Apo redunhu zvinoumba pamusoro Pcba bhodhi vari makateyiwa uye chokuita nesimba romugove, kuti zvisaririra vanofanira kuva pfupi sezvinobvira uye sezvo pedyo sezvinobvira kuderedza dzomunyika kurwisa yacho pcb bhodhi.
6. urefu ari I / O akarongwa mukuru-nokukurumidza nematunhu, akadai vakawanda I / O mitsetse uye differential amplifiers uye mwero amplifiers, zvinofanira kuenzana. Kuti ichengetedzwe kunonoka kana danho kusuduruka.
7. zvisaririra imwe neimwe paiva pakati multilayer bhodhi kunofanira perpendicular mumwe kuderedza panaakabatanidzwa pamwechete. Dzivisa kunangiswa uye pakuenzanisa okumusoro akaturikidzana.
8. Kana ikanyanya chokuita conductive nzvimbo yakakura uye duku nharaunda, inofanira insulated pamwe nhete waya ane kureba kwete asingasviki 0.5mm. Upamhi dzakaonda waya hakufaniri asingasviki 0.13mm.
9. waya pedyo kumucheto akadhindwa redunhu bhodhi kunofanira kupfuura 5mm kubva kumucheto akadhindwa redunhu bhodhi. Pasi waya zvinogona pedyo kumucheto bhodhi kana kunodiwa. Kana kutungamirira njanji rinofanira akaiswa panguva kubudiswa wakadhindwa redunhu puranga, daro pakati waya uye bhodhi zvinofanira kanenge kupfuura kudzika mutungamiri njanji.
FASTPCBA Technology Co., Ltd ari nyanzvi pcb mugadziri muna China, Shenzhen. With makore 14 okukura, FASPCBA ichichinja rokutanga kirasi akaigadzira HDI pcb, pamwe kugadzirwa kugona 35,000 mativi meters.If uchida kudzidza zvakawanda Pcb , tapota nyorera: pcba06@pcb-smt.net
Post nguva: Aug-27-2018